Qaybta 1.How in ay tirtirto video shaqsi ka YouTube
Qaybta 2.How in ay tirtirto ah YouTube channel / account YouTube
Talooyin Qaybta 3.Some iyo tabaha loogu tirka videos ka YouTube iyo website-yada kale video
YouTube waa mid ka mid ah qalabka online ugu caansan ee maanta. Tiro badan oo dad ah booqo YouTube loo helo warka, music dambeeyay, isjiidka filim, dokumantaaryada, barad ah oo funny videos iwm Maxaa xitaa YouTube ka muhiimsan waa xaqiiqda ah in uu ku siinayaa awood ay ku wadaagaan daqiiqado aad foomka ah videos.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inuu jeer marka aad doonaysid in video ah oo aad markii hore Uploaded tirtiray. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay xaqiiqada ah in Upload la sameeyo iyada oo aan la siiyo badan oo fikirka ah oo ku kicisay ah oo daqiiqad ama aad rabto si fudud video hore tageen oo gelin cusub oo updated mid meeshiisii. Waxa kale oo jira ayaa laga yaabaa in arrimaha la copyright in aad ku qasbi karta oo aad dumisid aad video ama mararka qaarkood channel oo dhan on YouTube. Waxba ma ahan wixii sababaha ay yihiin, waxaan doonayaa in aan kuu sheego sida ay u tirtirto aad videos YouTube iyo channels iyadoo la kaashanayo talaabooyin aad u fudud.
Qaybta 1aad Sidee in ay tirtirto video shaqsi ka YouTube
Ha noo bilowdo barashada sida loo tirtiri video shaqsi on YouTube in la bilaabo. Waa in aad xusuusataa in aad tirtiri kartaa oo kaliya kuwa videos in aad adigu iskaa u uploaded. Marka la tirtiro, qofna ma awoodi doonaan in ay arkaan video in si gaar ah Diintiinii dambe. Sidoo kale, waqtiga xaadirka ah waxaad tirtiri kartaa oo kaliya videos isticmaalaya app YouTube ku macruufka iyo Android iyo sidoo kale jaridda ee in aad xisaabta YouTube isticmaalaya computer ah.
Tallaabada 1. Log in si YouTube, ka dibna la furo menu isticmaalaya button soo socda dhinaca gacantaada bidix hogaanka ku heysay.
Tallaabada 2. Tag My Channel> Videos si aad u aragto liiska videos uploaded aad.
Tallaabada 3. Marka aad hesho video aad rabto in aad la tirtiro, riix hoos icon u menu soo socda la siiyaa faahfaahin video ah.
Tallaabada 4. Markaas, si fudud riix badhanka 'tirtirto' ama icon iyo in ay tahay.
Tallaabada 1. Log in si YouTube ka dibna riix on icon soo socda ama badhanka.
Tallaabada 3. Marka aad hesho video aad rabto in aad la tirtiro, riix hoos icon u menu waa in aad ka heli soo socda si de video ah
Markaas, dooro ikhtiyaarka ah ee 'Delete' in ay tirtirto video hadda. te video hadda.
Ka eeg xiriirka this - http://www.youtube.com/my_videos oo saxiix in aad xisaabta YouTube.
Mark video aad u jeclaan lahaa in ay tirtirto, isticmaasho sanduuqa saxda ah ee soo socota, waxa uu. Waxa kale oo aad dooran kartaa badan video files haddii aad rabto.
Hadda, u tag Tallaabooyinka oo dooro Delete si aad u dhamayso this.
Part 2 Sidee in ay tirtirto ah YouTube channel / account YouTube
Haddii aad qabto channel YouTube ah, waxaa jira fursad ah in ay sidoo kale ku xiran Google+ profile. Waa sidan sidii aad u tirtiri kartaa in aad channel ay dhacdo in.
Riix http://www.google.com/settings link tan iyo markaas saxiixo in la isticmaalayo button dhinaca gacanta midigta fog ama sida calaamadeeyay in shaashadda hoose. Hubi in aad saxiixa in isticmaalaya xisaab, isla markaana in uu leeyahay aad channel YouTube.
Hadda, mar aad ku gasho, guji rabtid Account.
Hadda, bogga soo socda, hoos u dhaqaaq hoose ee aad u bogga ilaa aad aragto ikhtiyaarka ah "Delete xisaabtaada ama adeegyada '. Marka aad u helay, guji ku yaal.
In shaashadda soo socda, dooro ikhtiyaarka ah "Delete waxyaabaha sida la siiyey in shaashada ka.
Hadda, si fudud guji icon ku tirtirto soo socda si 'YouTube' oo aad samaysay. Waxaad ayaa ugu danbeyn tirtiray oo dhan YouTube channel Diintiinii.
Part 3 talooyin Qaar ka mid ah iyo tabaha loogu tirka videos ka YouTube iyo websites kale video
Haddaba, haddii aad rabto in aad tirtirto videos ka YouTube iyo goobaha kale video, waa in aad toos ula xiriiri isha. Inta badan wax walba oo kale oo dhan websites kale video yeelan doontaa hab aad si ay u helaan xisaabtaada iyaga iyo isku tirtirto sida aad waa kiiska la YouTube arkay.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in video ah oo la tirtiray oo aan uploaded aad by, markaa waa in aad diyaar ka fool ah u dhac yar ka hor inta aanad waxa aad rabto. Waxaad arki, websites waxay u baahan doonaan sharaxaad faahfaahsan oo ka mid ah sababta ay u tahay in dejiyo video ah. Sidaas, waxaad u leedahay in ay diyaar la xaqiiqooyinka noqon ka hor inta aadan u dhawaanina.
Sidoo kale, sidii horeba u sheegay, celceliyay sida aad aan laga yaabaa in isla markiiba natiijada hesho. Sida ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan waa in aad la xiriirto qaybta ka hadlaysa cabashooyinka sida. La xidhiidh by email ama foomamka xiriir joogta ah laga heli karaa website-yada kuwaas. Waxaad samayn kiiska iyo si loo hubiyo in aad si fiican u sameeyaan.
Waxa kale oo aad ka warbixin kartaa xadgudubyo dhinaca sharciga ah, si ay hay'adaha ay khusayso ee aaggaaga oo iyaga ku eryan arrintan si degdeg weyn.
Si kastaba ha ahaatee, kan ugu horreeyey iyo qaanuunka ugu muhiimsan waa in la hubiyo in aad is ogow la qaybsiga ama uploading aad videos ee meesha ugu horeysa. Dad badan oo arrimaha laga hortagi karo sidan.
> Resource > Video > Sida loo tirtiri videos YouTube iyo channels